सूचना प्रबिधि Archives – Page3of5– Mukundasen Television
३२ साउन, काठमाडौं । नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी (टेलिकम)ले १५ अर्ब १ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को तुलनामा आव २०७३/७४ मा कम्पनीको नाफा २९ प्रतिशतले बढेको हो । आयकरको लागि मात्रै कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । करअघिको कम्पनीको नाफा २० अर्ब रहेको छ । १५ अर्ब रुपैयाँको (चुक्ता पुँजी) भएको कम्पनीले १५ अर्ब कै नाफा गर्न सकेको हो । अघिल्लो आवमा कम्पनीको नाफा ११ अर्ब...
के तपार्इ आफूले बोलेको कुरा स्वतः टाइप होस् भन्ने सोच्नुहुन्छ ? यदि त्यस्तो सोच्नुभएको थियो भने अब नेपाली भाषामै यो सेवा उपलब्ध भइसकेको छ । गुगल एन्ड्रोइड किबोर्डमार्फत अब तपाइले नेपालीमा बोलेको कुरा आफै टाइप हुनेछ । कुनै म्यासेज लेख्न वा सोसल मिडियामा अपडेट गर्ने स्टाटस लेख्न टाइप गर्ने झण्झट गरिराख्नु पर्दैन । गुगलले यो सेवा अंग्रेजी भाषामा धेरै पहिले नै उपलब्ध गराइसकेको थियो । धेरै जनसंख्याले बोल्ने अन्य भाषामा पनि...
युट्युब तथा टेलिभिजन नेटवर्कहरुलाई माथ दिनेगरी सोसल मिडिया जाएन्ट फेसबुकले नयाँ डेडिकेटेड भिडियो च्यानल सर्भिस लञ्च गर्दैछ । प्रयोगकर्ताले निकट भविष्यमै आफ्नो फेसबुक वालमा वाच ट्याब देख्नेछन् जहाँ गएर विभिन्न खाले भिडियो शोहरु हेर्न पाइनेछ । Watch पर्सनलाइज्ड हुने भएकाले प्रयोगकर्ताले आफै नयाँ नयाँ भिडियो तथा शो हरु खोज्न पाउनेछन् । साथै भिडियो दर्शकहरुले शो मा आएका कमेन्ट हेर्न, साथी तथा डेडिकेटेड ग्रपलाई कनेक्ट गर्न सक्दछन् । फेसबुक पोष्टमार्फत सिइओ मार्क जुकरबर्गले भनेका छन्ः...
MTV Business Talk , 24-Jan-2015
Rochak Sansar, 14-Feb-2015
सायद तिम्रो मायामा
नछोइने आकाश छुन पुगेछु
सम्झना बिर्सना स..ल..ल..ल….
सुन भनन ! जुन हेरन !!
माघ १२ ,कावासोती छैठौ नवलपुर महोत्सवको तेस्रो सास्कृतिक कार्यक्रममा हास्य व्याङ्गात्कम कलाकार मनोजको प्रस्तुतीले दर्शकले...
कावासोती, १२ माघ नेपाली काँग्रेस हुप्सेकोट गाउँपालिकाले गाउँपालिका अध्यक्षमाथी भएको दुव्र्यबहार र हातापातको प्रयास प्रति...
काठमाडौँका ६ युवा ५० लाख लुटेर गर्लफ्रेण्डसंग डेटिङ्ग
अग्नि सापकोटा सभामुख पदमा निर्विरोध निर्वाचित
प्रतिनिधिसभाले आज सभामुख पाउँदै
कावासोतीमा फाल्गुन ५ गतेबाट राईनो संरक्षण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता हुने